Qeybta:Aaladda13 min akhris
Ka tagida qalbi ka buuxan mahadnaq iyo madax aqoon buuxda leh
Sida inbadan oo idinka mid ahi ogyihiin, Mu'asasada 'McKnight Foundation' waa qorrax dhaca barnaamijkayaga Wabiga Mississippi iyadoo la eegayo mudnaanaha kale ee istiraatiijiyadeed. Muddo 27 sano ah, barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyey soo celinta tayada biyaha iyo in la hubiyo nidaam wabi nadiif ah oo bulshooyinka ku nool guud ahaan dhulka Mareykanka. Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay wada-hawlgalayaashayaga iyo horumarkooda xagga caafimaadka Wanaagsan iyo adkeysiga badan ee Wabiga Mississippi.
Waxaan jecelahay inaan nafteyda ka fikiro sidii xubin dheer oo xubin ka ah barnaamijka barnaamijka McKnight's Mississippi River. Waxaan u shaqeeyey sidii shaqaale McKnight muddo toddobo sano ah, intaas ka horna, waxaan 10 sano oo taageero mashruuc ah ka helay barnaamijka 'McKnight's Mississippi River' ee deeqda loo siiyey loo shaqeeyahaygii hore, Machadka Beeraha iyo Ganacsiga. Iyada oo ay dhacdo qorrax dhaca barnaamijka webiga, saaxiibkay Julia Olmstead ayaa ka soo guurtay McKnight dhawr usbuuc ka hor, iyo badhtamihii Maarso, waxaan bilaabi doonaa doorkeyga cusub madaxa fulinta ee Mu'asasada Beeraha Dib-u-Dejinta.
In kasta oo aan hayo murugada barnaamijka Mississippi River dhammaanayo, waxaan dareemayaa farxadda ah in aan qayb ka ahaa wax ka weyn midkeenna. Waxaan rajaynaynay aragti fog oo sharaf leh: si loo soo celiyo caafimaadka nidaamkan weyn ee wabiga Mississippi. Webiga afaraad ee ugu dheer adduunka, Mississippi waxay qubtaa qeyb ama dhammaan 31 dowladood - macnaha guudna, falalka shaqsiyadeena ayaa laga yaabaa inay yaraadaan. Haseyeeshee deeq-bixiyeyaasha iyo shuraakada ayaa ku adkeystay xannibaadda ay la leeyihiin beeralleyda iyo milkiileyaasha guryaha, ogeysiinta saraakiisha gobolka iyo dowladda dhexe, ka qeybqaadashada go'doominta, u muujinta welwelka shirkadaha, iyo barayaasha codbixiyeyaasha iyo macaamiisha.
"Maanta, beeralayda, kuwa deegaanka, iyo guud ahaan shacabka ayaa aad ugu horumarsan fahamka dhulka iyo isku xirnaanta biyaha, anaguna waxaan u maareeynaa biyo aad uga fiican kuwii hore." —ARI MULLER, MISSISSIPPI BARNAAMIJKA RIVER MILSISS
Kadib barnaamijkii Mississippi River ee 27 sano ee dadaalka ahaa, kaas oo ay kujiraan 1,400 oo deeq oo isugu jira in kabadan $190 milyan, kuma caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay sida aan sameynay. In kasta oo qaar ka mid ah tilmaamayaasha caanka ah ee noolaha, sida buuxinta qashinka ee harada Lake Pepin (sii wadida xawaare deg deg ah) iyo aagga dhimashada ee Gacanka Meksiko (sida ugu badan abid inta jeer ee xagaaga), waxaa laga yaabaa inaysan dhiirrigelin kalsooni badan, Waxaan ku arkay horumar aad u weyn muddo saddex sano ah.
Horraantii 1990naadkii, waxaan ku qaatay laba xagaa oo baraha bulshada ku wacyigelinayey bacriminta iyo maareynta sunta cayayaanka. Marar dhif ah ayaa beeraleydaas waxay sameeyeen xiriirka ka dhexeeya isticmaalka kiimikada iyo sahayda biyaha ee dhulka hoostiisa. Waqtigaas ka dib, dhul-biyoodka ayaa wali loo arkaa inuu yahay xanaaq ka yimaada muuqaalka isla markaana ugu faa iidada badan marka la maydho. Webiyaasha ayaa loo maleynayay inay sifiican waxtar u lahaan jireen markii biyaha la dhaqaajiyo iyo biyaha dhaqaaqaya sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Maanta, beeralleyda, kuwa deegaanka, iyo guud ahaan dadweynahaba waxay si aad ah ugu horumarsan yihiin fahamka dhulka iyo isku xirka biyaha, waxaanan u maareyneynaa biyo aad uga fiican kuwii hore. Mid ka mid ah natiijooyinka wanaagsan ee laga helo caafimaadka webiga waa in magaalooyinku mar kale u weecdaan dhanka webiyada. Minneapolis, St. Paul, La Crosse, Dubuque, iyo St. Louis waa magaalooyin kooban oo si xoog leh maalgashi ugu sameeyay wabiyada biyaha ee Mississippi. Biyaha nadiifka ahi waxay keenaan nashaadaadyo madadaalo oo dheeri ah, kuwaas oo dad badani ka fekeraan webiga qolka codbixinta iyo dukaanka raashinka.
Laba qof oo wata baaskiil wada wabiga Mississippi ee ku yaal St. Paul, MN. Deynta sawirka: Bogdan Denysyuk / Shutterstock.com
Toddobo cashar oo la bartay
Toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan weydiistey dhowr deeq-bixiyeyaal McKnight iyo la-hawlgalayaasha inay wadaagaan wax ku barashadooda ku dhawaad saddex sano ee shaqada. Maxaa lagu guuleystay, maxaase lagu guuleysan? Aaway deeq-bixiyeyaashu taageereen, xaggee ayaan ku dhicnay? Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah aragtiyada qiimaha leh ee aan bartay.
1. Mashaariicda shaqsiyeed waxay ku dadaalaan isbedel, laakiin hadafka weyn waa isbadal. Ogow farqiga u dhexeeya labada. Sida aasaasyo kale oo badan oo qoyska ah, McKnight wuxuu sameeyay deeqo badanaa oo daboola muddo labo sano ah. Tani waa, rajo-qabasho, waqti ku filan oo isbedel lagu dhaqaaqi karo - tusaale ahaan, tirada acres ee biyo-fadhiyada dalagyada daboolan, ama tirada sharci-dejiyayaasha aqoonta u leh siyaasadda-webiga-taageerta. Hadana qiyaasta iyo waqtiga mashruucyadan ayaa ah hoos u dhaca baaldi marka la barbar dhigo himilooyinka guud ee barnaamijka webiga. Aagga dhintay ee gacanka khaliijka ayaa nala joogi doona sannado badan, sannado badan, xitaa haddii milkiye kasta oo dhul leh uu aqbalo dhaqannada dib-u-cusboonaysiinta iyo dhul-daaqsimeedka qoyan ayaa dib loogu soo celiyaa dhammaan badhtamaha Midwest.
Hay'aduhu waxay fursad u leeyihiin inay ku xiraan dhibcaha u dhexeeya dhowr mashruuc oo dhulka ah iyo ujeedka weyn ee isbedelka. Caqabada, si kastaba ha noqotee, waa in ay fududahay in luminta geedaha geedaha. Faa'iidooyinka mashruuca dhiirrigelinta dillaaca daboolan, tusaale ahaan, waxay ka yar yihiin tirada gaarka ah ee acres la ansaxiyay, iyo inbadan oo ku saabsan casharrada laga bartay ee ku saabsan qaab dhismeedka dhiirrigelinta waxtarka leh, kaalmada farsamada, iyo farriinta lagu dhex dari karo mashaariicda kale. Ka sokow taageerada maaliyadeed, maalgeliyayaashu waxay leeyihiin door inta badan la iska iloobo si ay u fududeeyaan wareejinta barashada udhaxeysa deeq bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha.
Oo laga yaabee sida ugu muhiimsan, maal-geliyayaashu inay u baahan yihiin inay fahmaan oo ay gudbiyaan farqiga u dhexeeya mashruuc iyo yoolalka muddada-dheer ee isbeddelka. Mashruuca abuurka daboolida ayaa lagu wajihi karaa qaab toosan, iyada oo la goynayo dhowr doorsoomeyaal ah lana tijaabiyo habab kala duwan oo lagu beddelo dhaqanka beeraleyda. Haddii aan sameyno mashruuca X, ka dibna natiijooyinka Y ayaa dhici doona. Yaraynta aagga dhintay ee Gacanka, dhinaca kale, waa waddo ka sarreysa isbeddel toos ah waxayna u baahan tahay qaab isbeddel ah. Aagga dhintay iyo dadaal kasta oo isbeddel ah, mashruuca X lama fili karo inuu ku yeesho saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan himilooyinka ugu dambeeya ee yareynta nafaqada ee Gacanka iyo cabirka aagga dhimashada.
2. Waxaan sidoo kale badanaaba ku riyoonaa inaan helno qormadan lacagta ah - siyaasad gaar ah ama aalad wacyigelin oo si mucjiso ah u horseedi doonta isbadal. Rasaasta qalinku kama jiraan adduunka dhabta ah. Waxaa fiicnaan lahayd in laga fikiro shaqada mashruuc sida jawaanno shaqsiyadeed oo wadajir ah oo looga hortago fatahaadda isla markaana kaxeeya isbeddelka isbeddelka. Waxaan dambiile ku ahaa fekerkan sida qof kasta. Waxaan soo maray marxalad mustaqbalkeyga markii aan raadraaci lahaa inta badan dhibaatooyinka deegaanka iyo dhaqaalaha ee soo foodsaaray bulshooyinka beeralleyda ah dhiirigelin aan habooneyn iyo siyaasadaha ku jira sharciga beeraha ee federaalka. "Haddii dadku ay i dhageysan lahaayeen oo ay ku taageeri lahaayeen isbeddeladan ku saabsan biilka beerta, waxaan moodayay," markaa waxaan lahaan doonnaa horumar, dib-u-cusbooneysiinta beeraha iyo sidoo kale cunnooyin caafimaad qaba iyo dhaqaalo adag oo miyi ah! "
Waxaan u arkaa sida u-qareemeynta siyaasaddu ay muhiim ugu tahay wax ka qabashada arrimahan. Laakiin u doodista siyaasaddu ma ahan mid wax ku ool ah gooni u soocidda; waa in lagu siiyaa cilmi-baaris on-dhulka ah iyo wacyigelinta, abaabulka, tixgelinta danaha waaxda gaarka ah ee doorbida xaaladda hadda jira, iwm iyo u doodista siyaasaddu waa in ay ahaataa mid soo noqnoqda oo ay ku darto barashada - dhaqaalaha, caqabadaha deegaanka, iyo jawiga siyaasadeed aad ayuu uga duwan yahay maanta sidii ay ahaayeen toban sano ka hor.
Anigoo ah maalqabeeye, waqti badan baan ku qaatay mashruucyo aan isleeyahay waa xabbado qalin ah. Iyagu ma aha. Waxaan bedelkeed bixin lahaa qiime dheeri ah aniga oo fududeynaya is dhexgalka badan ee ka dhexeeya mashaariicda kaladuwan. Haddii mashaariicdaas loo malayn karo inay yihiin jawaanno ciid ah oo aan si gaar ah waxtar ugu lahayn cidlada laakiin si wada jir ah ay u leexin karaan biyo daadadka, laga yaabee in maal-galiyayaashu ay isu arki karaan iyaga oo ah kooxda taageerada ka caawisa isku-dubbaridka dhismaha daadka.
Ka fikir shaqada mashruuca sidii jawaanno bacaad leh oo shaqsiyadeed oo si wada jir ah uga hortaga daadadka oo kaxeeya is-beddelka isbeddelka. Deynta sawirka: iStock.com/nemar74
3. Markaan qiimeyneyno dadaallada lagu gaarayo isbadal, waxaan ubaahan nahay wax kabadan qiyamka caadiga ah. Indha-indheeyn koowaad ayaa laga yaabaa in loo maleeyo in wax ka qabashada aagga dhintay ee gacanka khaliijka ay tahay mid toos ah. Waxaa si ballaaran loo aqbalay in nafaqooyinka xad-dhaafka ah ee ku qulqulaya wabiga Mississippi ay yihiin kuwa wax ku biiriya koboca algal iyo hoos u dhaca uruurinta ogsijiinta la kala diray. Xalinta aagga dhintay ayaa si fudud u baahan yareynta qulqulka nafaqooyinka beeraha beeraha ee Midwest, sax? Haddii aan cabirno horumarkayaga dhimista qulqulka nafaqada beeraha, taasi waxay bixin doontaa tilmaam wanaagsan oo horumarka ah.
Nasiib darrose, qaabkani wuxuu u arkaa meesha ugu sareysa barafka wuxuuna iska indhatirayaa boqolkiiba 90 biyaha ka hooseeya. Codsiga nafaqada ee beeraha ayaa noqon kara darawal cad oo aagga dhimashada ee Khaliijka, laakiin ma gaari karno hoos u dhac ballaaran oo nafaqooyinka ah annaga oo aan aqoonsanayn qodobbada badan ee udub dhexaadka u ah nidaamka sida ay yihiin - sida ceymiska dowladda ee kab ahaan la kabiyay, caasimada. qulqulka beeraha Midwest, mudnaanta sahayda beeraha, baahida farsamo ee beeraha, cilmi baarista beeraha iyo horumarka, caadooyinka dhaqanka, iyo siyaasadaha maaraynta biyaha ee dowladda hoose.
Habka sayniska wuxuu nagu dhiirrigelinayaa in aan ka saarno doorsoomayaasha oo aan u fiirsano isbeddelada ku dhaca doorsoomayaashaas kadib waxqabadyada. Maaddaama aan ahay injineer tababbaran bey'ada, taasi waa qaabkeyga dhicitaankeyga ee ku saabsan isbadalka wadista. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogahay in qaabkan dhimistu uu yahay mid ka soo horjeedda waxa looga baahan yahay fikirka isbedelka. Waxaan u baahanahay inaan isku duubno jahwareerka, dunida aan tooska aheyn ee isdhexgalka mugdiga ah ee ka dhexeeya nidaamyadan kala duwan oo aan helno dariiqooyin lagu dhiirrigeliyo mashaariicda midba midka kale ka dhiso.
4. Isbadalku wuxuu sameeyaa aragtiyo kaladuwan, wajiyo, iyo dariiqooyin ogaal aad uga muhiimsan sidii hore. Sidii aan horayba u soo sheegnay, haddii aan aqbalno inaanan garanayn sida loo dhinto aagga dhintay, markaa waxay raacaysaa inaannaan lagu qasbin qaab gaar ah. Waxaa laga yaabaa in horumarka tikniyoolajiyada ama siyaasadaha cusubi ay gacan ka geysan doonaan xallinta, oo waa inaan lahaanno is-hoosaysiinta si loo garto in laga yaabo in xalalka lagu dhisi doono qaabab ka baxsan shirarka caadiga ah iyo dhaqanka ugu weyn, sida xiriirka ruuxiga ah ee cusub ee ka dhexeeya dadka iyo biyaha. Haddaan haysanno caddeyn lid ku ah - in qaab gaar ah oo run ahaantii dhimanaya aagga dhintay — markaa waxaan heli lahaa raaxo weyn oo aan inbadan oo ka mid ah ukuntayada maahmaahda ku ridi hal dambiil. Nasiib darrose, annagu ma lihin.
5. Waxaan u jeednaa kaliya qiimaha isbedelka aan arki karno. Waxaan u baahanahay inaan dadka ka caawino inay arkaan waxa salka ku jira. Had iyo jeer waa wax laga argagaxo in la fiiriyo sawiro wasakhaysan oo biyo ah 50 sano ka hor oo arag baabuurta halista ah, wabiyada gubanaya, iyo kalluunka u dhimanaya iyo xayawaanka duurjoogta ah ee sumcad ulahaa harooyinka iyo wabiyada Mareykanka. Waan ku hanweynahay ficil wadareedka oo hadda ka dhigaya masraxaas wax aan caadi aheyn, magaalooyinkna sida Minneapolis, wabiyada webiyuhu waxay ka weecdeen goobo aan wanaagsanayn oo diidan goobaha la dego.
Siyaabo badan, waajahashada nooca wasakhda ah ayaa ka sahlan waxa aan maanta wajahayno. Wabiga Mississippi's Lake Pepin ayaa ah mid aad u qurux badan sidii waligeed; indha indheeyayaasha joogtada ahi waligood ma ogaan doonaan in qulqulatooyin aad u badan oo qulqulka biyaha webiga Minnesota ay buuxinayaan qaybo ka mid ah harada isla markaana ay aasayaan kalluunka muhiimka ah iyo deegaanka duurjoogta ah. Sidoo kale, heerarka oksijiinta ee hooseeya kala-baxa ee abuuraya aagga dhimashada gacanka khaliijka waxay dhacdaa meel xeebta ka baxsan wayna adagtahay in la fiirsado. Sideen ku qaban karnaa shaqo wanaagsan oo dareenka ka dhigta wasakhda aan muuqan?
6. Daacad, awood, sheeko wadaag ayaa horseedda ficil. In kasta oo farriimaha, sheekooyinka, iyo istiraatiijiyadda isgaarsiinta guud loo aqoonsado inay muhiim u yihiin isbadalka wadista, waxaan sidoo kale ubaahanahay inaan ka caawino deeq bixiyeyaasha iyo wada-hawlgalayaasha inay iska kaashadaan sheeko ballaaran, wadaag ah.
Waxa i soo jiitay buugga cusub ee dhaqaalaha ku guulaysta ee Nobel Prize Robert Shiller dhanka sheekada dhaqaalaha. Dabeecadda xirfadeed waa gogol xaar u ah aragtida dhaqaalaha – in shakhsiyaadka ay beddelaan dhaqan dhaqaale darawalada sida saamiyada dulsaarka. Tani shaki la'aan waa run, laakiin Dr. Shiller wuxuu ku doodayaa in sheekooyinka aan u sheegno nafsaddaada ay saameyn aan la qiimeyn ku laheyn akhlaaqda. Markaad iskudayeyso inaad fahanto darawalada kacsanaanta suuqa iyo basaska, dhaqaaleyahannada waxay u baahan yihiin inay fiiro gaar ah u yeeshaan sheekooyinka.
Go'aan-qaadeyaasha muhiimka ah iyo dadweynaha guud ahaanba kuma qasbana inay ka fikiraan Webiga Mississippi had iyo jeer, iyo markay sameeyaan, waxay had iyo jeer ku taagan tahay daadadka, ama kalluunka dila, ama dhacdo kale oo xun. Xaaladahaas, xalalka horyaala waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo falcelin iyo cidhiidhi ku jira - in magaaladu ay dhisto daarad sare, ama in gobolku yeesho sharciyo adag oo ku saabsan wasakhowga. Waxaan ka sii wadi karnaa intaa ka badan anagoo haysanna sheeko wadaag ah oo leh aragti wanaagsan oo dhiirigelisa dad badan inay tallaabo qaadaan.
7. Raacida qorshe istiraatiijiyadeed waa muhiim, laakiin waa in lagu lammaanaa rabitaan shaqsiyeed. Hawsha weyn waxaa qabta ururada si wanaagsan loo maalgeliyo oo leh aqoon yahano iyo ujeedooyin istiraatiiji ah oo cad. Shaqada weynna waxaa qabta shaqsiyaad si sahlan u leh hamiga isla markaana wado in la abuuro wax cusub. Ganacsatada waa inay fiiro gaar ah siiyaan labada. Waxaan ahay taageere weyn dadaalka sida Xiriirka Castanea, kaas oo siiya dadka xiiseeya tababar, xiriiro, iyo taageero maaliyadeed si loo raaco isbedelka isbedelka.
Ardayda ka socota Dugsiga Sare ee Elk River waxay tusaale ahaan uga soo gudbaan Webiga Mississippi. Deynta sawirka: Saaxiibbada wabiga Mississippi
Mustaqbal rajo leh
Gabagabadii, Waxaan ka tagayaa barnaamijka Mississippi ee McKnight oo rajo ka qaba mustaqbalka. Waxaan si dhakhso ah u qirayaa in naftayda ka yari 27 sano ka hor ay ka xishoon lahaayeen xajmiga aagga dhimashada maanta iyo tilmaamayaasha kale ee noolaha. Laakiin aniga iyo boqolaal kaleba waxaan aad ugu xikmad badanahay isbadalka isbedelka socdaalkan awgiis. Waxaan u tilmaami karnaa maydadka biyaha aan tira lahayn ee la wanaajiyey. Waxaan aragnaa habab cusub oo looga fikiro beeraha oo, sida xoogga loo saarayo caafimaadka ciidda, oo wadista sida ay beeralleyda iyo bulshooyinku u qaadanayaan dhaqanno kor u qaadaya tayada biyaha.
Wadayaasha dhaqaalaha ee saameeya isticmaalka dhulka iyo biyuhu way xoog badan yihiin, weyna xoog badan yihiin sidii aan markii hore ogaaday. Markii aan galnay maalgashiga McKnight iyo shuraakada iyo deeq-bixiyeyaasha marka loo eego macnaha guud ee 125-milyan acre, $75 bilyan warshadaha beeraha Midwest, layaab malahan in sameynta isbedel ballaaran oo lagu sameeyo dhaqamada dib-u-cusboonaysiinta ay gaabis tahay. Hadana waxaan leenahay faa iidada dulqaadka Hooyo dulqaad leh oo dulqaad leh. Ka dib in kabadan 100 sano oo dib-u-habeyn lagu sameynayey webiyaasha iyo dhul-weynaha Midwest, xaqiiqda ah inaan ilaalino carrada dhexdhexaadka ah ee caafimaad qabta iyo ilaha biyaha ayaa runtii ah guul bayoolaji ah. Nuxurka samirku waa in ay qaadato waqti dheer si loo arko horumar, maaddaama wabiga Mississippi uu leeyahay tobanaan sanadood oo faashiish ah, fosfooraska, iyo sunta cayayaanka lagu buufiyo nidaamkiisa.
Deeq bixiyaasha iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa wanaajiyey wabiga Mississippi iyo bulshooyinkayaga, waxayna naga qaateen waddo dheer safarka aan ugu aadnay qaab muuqaal muuqaal ah iyo nidaamka webiga.
Waxaan ku qanacsanahay in waqti uun mustaqbalka - laga yaabee 25 sano laga bilaabo hadda - inaan arki doonno Muuqaalka Midwest oo ay ka buuxaan dalagyo aad u qoto dheer, doog, iyo geedo. Waxaan arki doonnaa wabiga Mississippi oo nadiif ah, adkeyn kara, iyo bartanka udub dhexaadka dhaqanka iyo dhaqaalaha Midwest. Markay taariikhyahannadu dib u eegaan taariikhda wabiga iyo waxyaabihii ka qayb qaatay soo nooleynta, McKnight Foundation waxay ku faani doontaa inay taageertay hay'ado badan oo aasaas u ahaa isbadalka isbedelka.
Anigoo ku hadlaya magaca guddiga McKnight iyo shaqaalaha, waxaan u mahadcelinayaa qoto dheer shaqada adag iyo ballanqaadka deeq-bixiyeyaasha McKnight iyo la-hawlgalayaasha. Waad hagaajisay Wabiga Mississippi iyo bulshadeena waxaadna qaadatay waqti dheer safarka aan ku aadnay qaab muuqaal bedel leh iyo nidaamka webiga. Waad ku mahadsantahay, waxaanan rajeynayaa in wadooyinkayagu mar dhow soo gudbaan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan barnaamijka Mississippi River, fadlan kala xiriir Sarah “Sam” Marquardt, maamulaha barnaamijka, at: smarquardt@mcknight.org.
Sara “Sam” Marquardt, Mark Muller, iyo Julia Olmstead ayaa sawiro ka qaadanaya xaflad lagu maamuusayo deeq-bixiyeyaasha barnaamijka wabiga Mississippi. Dhibcaha Sawirka: Molly Miles
By Mark Muller Sebtember 2019